Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): August 2017
at 8/25/2017 09:25:00 AM
ဧရာဝတီ မြစ်ဘေးမှာ ဒေသခံများ လက်ယက်ကျင်း ရွှေကျင်တာက ဟိုးရှေးရှေးကတည်းကပါ မြစ်ရေ ခဏတဖြုတ်နှောက်တာပဲရှိတယ် နောက်မနက်ပြန်ကြည်တာပဲ။
ငယ်ငယ်တုန်းက မြစ်ရေကိုခပ်သောက်ကြတယ်။ နွေရာသီ ဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်ရေဟာ အကောင်းဆုံး သောက်ရေဖြစ်ခဲ့တယ်။ အေးမြမြ နဲ့ သောက်ကောင်းလို့ လူကြီးတွေက တကူးတက သွားခပ်ခိုင်းလေ့ရှိတယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ပေါ်မှာပဲ ကျနော်တို့ ရေကူးတတ်ခဲ့တယ်။
ဧရာဝတီမြစ် လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားတာက ၁၉၉၅ နောက်ပိုင်း တရုတ်ပြည်မက တရုတ်လုပ်သား အများအပြား ဧရာဝတီမြစ်ဖျား ပေါ် ရောက်လာကတည်းကပါ။
(၁) ရွှေဖေါင်အကြီးစား များ ထောင်ချီ ရောက်လာခြင်း
(၂) ရေအားလျှပ်စစ် လုပ်သားများ ထောင်ချီ ဝင်လာခြင်း (ချီဖွေ နဲ့ မြစ်ဆုံ)
တရုတ်လုပ်သားတွေဟာ အမိုက်စွန့်ပစ်တဲ့ နေရာမှာ စည်းကမ်းမရှိဘူး။ နောက်ပြီး ပလားစတိတ် နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ ready made အသားအသောက် အသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်။
မနှစ်က တစ်ခေါက် ကလေးတွေနဲ့ မြစ်ရေသွားချိုးမယ်ဆိုပြီး ဆင်းကြည့်တာ မြစ်ကြမ်းပြင်အောက်မှာ ပလားစတိတ်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ အဝတ်အစားအပိုင်းအစ အမိုက်တွေ အင်မတန် များနေတာ တွေ့ပြီးကတည်းက နောက်ပိုင်း မသွားတော့ဘူး။ အခု မြစ်ကမ်းဘေးမှာနေတဲ့ ကျနော့ကလေးတွေ ရေမကူးတတ်တော့ဘူး။
ဒါက မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း အစပိုင်းပဲရှိသေးတာပါ။ မေခ မှာ ဆည် အနည်းဆုံး ငါးခု၊ မလိခ ဖက်မှာ အနည်းဆုံးဆည် ၂ ခု ဆောက်မယ် ဆိုတာ ကနဦး စီမံကိန်း ဖြစ်ပြီး မြစ်ဆုံမှာ လုပ်နေတဲ့ ဆည် ကြီး မလုပ်ဖြစ်ရင် မေခ နဲ့ မလိခ ဖက်မှာ ထပ်တိုး ဆောက်မယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဆည်အားလုံးပြီးစီးအောင် ဆောက်မယ် ဆိုရင် နောက်ထပ် တရုတ်လုပ်သား အနည်းဆုံး လေးသောင်းကျော်ရဲ့ အမိုက်တရိုက်တွေကို ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ထိ ခံယူရမှာပါ။ ကြာချိန်ကတော့ ၂၀ နှစ်ကြာမှာဖြစ်တယ်။
တရုတ်လုပ်သား ၁/၃ ကတော့ အိမ်ပြန်မယ် ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ဒေသခံဖြစ်သွားမှာပါ။
ဂေဟ စနစ် အပြောင်းအလဲ ဆိုတာတွေ၊ social impacts ဆိုတာတွေ ကျနော် မတွက်တတ်ဘူး၊ အခုလက်ရှိ မြင်နေရတဲ့ အရာကို သက်သေခံခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်သူများ စဉ်းစား ဖို့ နဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့ တင်ပြခြင်းပါ။
ကချင် ကက်သလစ်ဆရာတော် (၃) ပါးက စစ်မှန် သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို တိုင်းရင်းသားများ အားပေးရန် ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်
at 8/24/2017 10:11:00 AM
Rcm Kawnghka's post.
Rcm Kawnghka added4new photos.
ကချင် ကက်သလစ်ဆရာတော် (၃) ပါးက စစ်မှန်
ကချင်ပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်
နေကြသော ကချင် လူမျိုး ကက်သလစ်ခရစ် ယာန် ဆရာတော်
များဖြစ်တော်မူကြသော ဆရာတော်သုံးပါး (မြစ်ကြီးနား ကက်သလစ်
ဆရာတော် ဖရန်စစ်ဒေါတန်၊ ဗန်းမော် ကက်သလစ် ဆရာတော်
ရေမွန် ဆွမ်လွတ်ကမ်၊ လားရှိုး ကက်သလစ် ဆရာတော် ဖိလစ်
လဆပ်ဇာဟောင်း) တို့ကရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင် ပြည်နယ်တို့
တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်ကြပါရန်
သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့က ကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်
လိုက်သည်။ ဂလိုရီးယားသတင်းဂျာနယ်တိုက်သည် ၄င်းကြေညာ
ချက်မိတ္တူကို ဆရာတော်ကြီး ရေမွန်ဆွမ်လုကမ်ထံမှ အီးမေးလ်ဖြင့်
သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့၊ ညနေ ၇ နာရီတွင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကြီးများသည် ၄င်းကြေညာချက်ထဲတွင် အချက် (၄)
ချက်ကို မီးမောင်းထိုး တောင်းဆိုထားပြီး ၄င်းအချက် (၄) ချက်
များကမူ၊ (၁) တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
တကယ်ဖြစ်နိုင် ပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ ၀ိသေသ၊
ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အရင်းအမြစ်များပေါင်းစည်းမှုကို အာမခံပေး
မည့် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးမှ
သာလျှင် ကချင်လူမျိုးနှင့်တခြား တိုင်းရင်းသား များ၏ အရေး
ကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်ကြောင်း၊ (၂) တိုင်းရင်းသားများ၏ မိရိုး
ဖလာလယ်ယာမြေ ထုံးတမ်းဥပဒေကို လေးစားပေးရန်၊
၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်လိုက်သော လယ်ယာမြေဥပဒေသည်
တိုင်းရင်းသားများ၏ မိရိုးဖလာ လယ်ယာမြေကျင့်သုံးမှုကို
ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း၊ လယ်ယာမြေကိစ္စ သည် တိုင်းပြည်
၏အနာဂါတ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဓိကသော့ချက် ဖြစ်ကြောင်း
ဖြင့် မီးမောင်း ထိုး ပြတော်မူကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဆရာတော်ကြီးများက၊ ““(၃) နှစ်ဖက်စလုံးက နိုင်ငံ
သားများ၏ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများ ကို လေးစားကြရန်၊
ဒုက္ခသည်များ၏ လယ်မြေများကို သိမ်းယူသွားလိုသူများနှင့် ရွှေ့
ပြောင်းခံသူများ၏မြေ ယာများကို ရယူလိုသူများ ရှိနေသည့်အ
အခွင့်အရေးကို လေးစားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်း၊ မြေမြှပ်မိုင်းကို
အဓိကလိုအပ် ချက်ဖြစ်ကြောင်း” ဖြင့် နိုင် ငံတော်အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား တောင်း ဆိုထားကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ““(၄) စစ်ပွဲများက ပြည်သူများ၏ အသက်
အိုးအိမ်နှင့် စားဝတ်နေရေးလုပ်ငန်းများကို ဖျက်ဆီးပစ်နေကြောင်း၊
များစွာ သော လူငယ်များသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်
အလမ်း မရှိခြင်းကြောင်း အန္တရာယ်များသော အခြေအနေတွင်
ရောက်ရှိနေကြကြောင်း၊ စစ်ပွဲများက လူကုန် ကူးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေး
၀ါးများသုံးစွဲခြင်းတို့ကို ဖန်တီးပေးနေကြောင်း၊ နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှု
အားနည်းခြင်းနှင့် တရား ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်း တို့ကြောင့်
လူဆိုးသူခိုးဓားမြများသည် ထင်ရာစိုင်း နေကြကြောင်း”” ဖြင့်
၄င်းကြေညာချက် တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားကြသည်။
at 8/21/2017 11:29:00 AM
Map of Kachin Land before 1948
at 8/21/2017 03:44:00 AM
at 8/19/2017 02:09:00 AM
AMYU SHA HTE MAJAN
at 8/18/2017 10:17:00 AM
Mungkan ting, Mungdan shagu, Masha amyu shagu ni hta " MAJAN" ngu ai hpe hkrum kadup nga ga ai re. Majan byin ai ngu ai shiga gaw, kabu hpa, pyaw hpa, shiga kaja n rai nga ai.
Majan ngu ai hta, Tara ai Majan hte N Tara ai majan gaw, myit masin kraw lawang kata hta, nsan n seng ai myit n ding n hpring ai myit hte, nammak lawhpa, kashun mya la, roi rip dip sha, magamamatu, maw lanyet, maw akrawk, maw lanyawp lam ni hte shabyin dat ai majan gaw ; -
" N Tara Ai Majan" yubak mara hte seng ai majan rai nga ai.
N Tara ai majan galaw shabyin ai ni hpe, n hkam sharang, n kam hkam sha ai hte, ninghkap gasat ai gaw, Tara ai majan rai nga ai. TinangaMungdan, amyu sha niaahkaw ahkang hte seng ai lam hta, gwi gwi hte n hkrit n tsang magrau rang ai hte tsap sana, tsun shaga, hpareng hparan tara rap ra lam hta shakut ai ni gaw tara ai majanaNingbaw Ningla Ningshawng Ningba, Myu tsaw, Mung tsaw ai share shagan ni rai nga ai. Nang, Ngai, Nanhte, Anhte yawng sai jet ai amyu rai yang gaw teng sha yawng hkyawm shang lawm ai hkrai rai sai.
" Dai majaw kaja ai amu chye galaw ninglen n galaw ai wa gaw, yubak mara kap nga ai" (Yaku 4:17) Dai rai yang Nang, Ngai anhte amyu sha ni, ( Tara ai majan hta shang lawm nga ga ai kun?) ( N tara ai majan shabyin ai ni maga de) mahtang shang lawm nga ga ai kun? myit yu na lam nga nga mali ai.
Dai ni anhte amyu sha ni hpe, amyu shamyit shamat sat kau masing hte n tara ai majan shabyin gasat hkrum sha hkamsha yak kyin nga ai hpe mu mada ga ai kun? Na lu ga ai kun? Chye nga ga kun? Dum nga ga ai kun?
Hpa majaw n tara ai majan shabyin nga ma ta? Anhte amyu sha ni madu ai anhteamungdan hpe, ra marin nam mak lawhpa myit hte, mazing la kau, madu sha kau na matu rai nga ai.
AnhteaMyen Mungdan Britisha Mung maden waanpu kaw rawng mat ai gaw (1885)ning Thibaw Hkawhkam waalakhtak kaw na rai sai. (1948-Jan'4 ya) Myen Mungdan Shanglawt lu ai aten du hkra rai yang shaning (63) ning Maigan Britisha ni up hpareng sha ai kaw na Myen Mungdan shanglawt lu ai rai sai.
Myen Mungdan shanglawt lu tim, Anhte Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni gaw shang chyat hta shang mat ai she re ai. J.W awngdawm Mungdan wa, Kachin State mungdaw byin mat nna, Munghpawm ngu ai kaw shang chyat lawm mat sai. Myenanpu kaw rawp sai.
(1962) ning hta Soshelist hpyen du, laba ka-up hpyen ladat hte dip up shajup ai npu de bai du shang sa ga ai. (ဆိုရှယ်လစ်) ngu ai hte maren (ဆိုရှယ်လစ်ကျစွာပေါင်းစည်းကြပြီ လစ်သောပညာစုံလင်စွာဖြင့် အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်သွားကြပြီလေ)
Anhte amyu sha ni mung ahkaw ahkang shamat kau tim (ဆိုရှယ်လစ်) hpaji gaw, mu mada, sharin hkam la, jai lang ai ni nga wa saga ai.
(ဆိုရှယ်လစ်) hpaji hpe, alu tam gabaw amyu myu hta makam masham hpung kata shinggyim wuhpung wuhpawng magam kata, sut masa, mung masa, amyu masa magam ni hta (ဆိုရှယ်လစ်) hpaji ni hpe akyu jashawn jai lang ai ni law law nga wa sai nrai ni? Makam masham hpung shabra, mying galai nhtawm, maigan de pru pru shang shang Dollar mahkrai lakang htan ai mung law law nga wa sai. ( Gasat shamat yak la ai majan zawn she byin nga sai kun?)
1988 ning hta hpyen jaubu hkawhkam ningnan tingnyang hta galai dung sai. Majan gasat lam shazim n kam ai. Simsa lam tsun jahta nga tim sinat, myawk , pyenli ni hte bawm du hkra sharu bun nga dingyang rai nga ai. Hpyen yen ni grai law sai. Sen lam du sai. Mu ga ai kun? Dum nga ga ai kun? Du Zanhta Sin hpe grai dum ai (ဒီမိုကရေစီပြောင်းပြန်) ngu ai laika ka ai ten hta grau laja lana byin hkrum sha nga saga ai.
Anhte amyu sha ni gasat ra ai majan law law nga mali ai. Dai majan ni gaw lawu na majan ni re ai.
(1) Nanghpam katsi majan hkrum sha nga ai 1962 Soshelist prat kaw nna rai sai. Laja lana amyu shamyit masing 52 ning rai sai. Ramma shayi shadang ni si htum sai. Ngam nga ai ni mung nau nna yang si na sha rai sai. Dum hprang ten rai sai.
(2) Myit jasat masa, htenza ma sai. Ndai majan mung anhte amyu sha ni hkrum kadup nga ga ai re. Bungli galaw shakut shaja na myit n rawng sai. Hpaji sharin lam hta myit n lawm sai. Shaniaten hta gaw yup chyu yup. Shana tup nhtoi hkren pyaw len zup nga ma sai. Buhpun mawn sumli ai maigan lai hkrai ka-up sai. Majan ndai hpe gasat dang na matu gara hku, myit yu ga. Shaning (40) jan sai, majan dang na lam tam ra sai nrai ni?
(3) Makam masham lam hta ginhka masat sai.
(4) Amyu baw sang lam yan hta myit garan shabra sai.
(5) Lamu ga yawng ka-up madu la, dut sha kau sai. Mungdan mat wa sai.
(6) Yehowa masat jaw da ai Mungdan, Yehowa shabyin shaprat da ai Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni, Yehowa Karai Kasang hte rau amyu sha ni majan gasat ra saga ai nrai ni?
Chyum laika (Pru 17:16) " YehowaaTingnyang de ladawn ai lata rai nga ai majaw, Yehowa gaw Amelek hpe prat dingsa gasat nga na sai. " Anhte amyu sha ni, tsaw htum ai Yehowaatingnyang de, chyoi pra ai lata sharawt nna, akyu hpyi yang, padip ahkaw ahkang jaw ai Karai Wa anhte lu nga ga ai hpe dum ga. ( Roma 12:1, 2)
" Dai re ai majaw, hpunau ni e, nanhteahkumhkrang hpe, hkrung nga ai, chyoi pra ai hte, Karai Kasang kaw sharawng awng ai hkungga matu nawng ya na, Karai Kasangachyeju hte ngai nanhte hpe shadut shahkat ma de ai, Dai gaw nanhteamyit masinadawjau ai lam rai nga ai." Dai hta kaga, ndai dinghta gaamyit n hkan dagraw ai sha, Karai Kasangamai kaja ai, sharawng awng ai hte hkum tsup re ai myit manglam hpe nanhte chye ginhka lu myit ga, myit nnan lu la na hku arawn asam galai nga mu."
Sai bung, Chyurum ai Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni gaw, Yehowa shi nan hpan da ai amyu rai ga ai hpe, dum sumru lu na matu, lawu na lam ni hpe kadun dik ai hku tang madun dat n ngai.
(1) Mungkan Sha-u Ing ai hta na, lawt ai amyu
(2) Sha-u lawt ai dinghku kaw na, kasha Gam, Shan Htoi Gam kaw na shangai shaprat yu hkrat wa ai amyu.
(3) Sha-u lawt ai Dinghta majoi ngu ai (Ararat Bum ) mayan kaw na nga shara ta, bu htawt ai amyu
(4) Sha-u Ing nna, lawt ai shara gaw
" Dinghta Majoi" ngu ai shara re ai lam tsun ai ginlen labau nga mali ai. (Chyum Laika) hta sakse mu lu ga ai. (NN 7:1-24), (Esai 54:9), (Mahte 24:3) (Luka 17:26), (Hebre 11:7) (II Petru 3:5,6) hpaji chye ai ni sawn da ma ai gaw, Mungkan Sha-u Ing ai ladaw gaw (BC 4350) ning hta re ai da.
(5) Sha-u lawt ai Shan Htoi Gam kasha ni shadang sha marai (9) nga ai lam, ndai shadang marai (9) ni gaw (BC-4000) aten hta kadai mung kadai tinang htuk manu dum ai maga de (Kumran) Bu htawt hkawm mat wa sai. Dai marai (9) ni gaw lawu na Shan Htoi Gamaamyu matu ni re ai da.
Gam = Tibet; Naw = Miwa: La =Sam;
Tu = Mungnun ; Tang = Dabang Tang
Yaw = Shapawng Yaw ( Jinghpaw Wunpawng amyu), Hka = Gorahka/ Pyilan, Sharoi = Mongolia ; Yun= Kayin/ Piyawn ( Ndai zawn kumran nna, nga shara kaga ga rai mat wa sai (raitim) Anhte Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni gaw, dai ni du hkra, arau sha, ndaw nhka nbra ai sha, anhteaMungdan kata hta nga pyaw nga len nga ga ai re.
Anhte shadang Yaw = Shapawng yaw ( Shapawng Yawng amyu sha ni gaw ) ya dai ni Miwa mung ngu ai de (BC 200) daram hta du nga ai shara ( Dinghta Wa Yang Ga) ngu ai de du nga sai re ai da.
Dinghta majoi kaw nna Dinghta Wa Yang Ga de du nga ai hpang (AD 300) daram hta gaw daini du hkra shamu nga, madu nga, up nga, hpareng hparan nga ai Awngdawm Shanglawt ai Jinghpaw Wunpawng Mungdan (Kachin Land) hpe Yehowa Karai Kasang jaw sai. Anhtea(Kachin Land) Jinghpaw Wunpawng mungdan hta daini du hkra shaning (hkying lam lai hkra) kadeanpuemayam tai, kadai maigan ni up sha nna, ahkaw ahkang masat ya ai lam nlawm ai. Tinang nan tinang amyu ni, tinangamungdan hta awngdawm pyaw nga ai amyu shabyin shaman ai Yehowa Karai Kasangachyeju ni hpe nang, ngai , anhte malap kau ai rai yang, dingbai dingna, dagam dala hkrum ai amyu, amyu sha ni mung htum mat, Mungdan mungtat shamat kau ai ni n byin u ga. Chyeju shakawn nga ga.
1948 January (4) Britishaanpu kaw na shanglawt lu saga ai. Myen ni hte myen mungdan she, shanglawt lu ai re. Anhte kaga bum nga masha ni shanglawt n lu ga ai. Panglung Ga Shaka hta myit hkrum masat ai lam n jaw kam sai. Shanhte shada da mung myit hkrum ai lam n nga ai. Mung masa lam hta manai makai magyi magaw galaw sai.
Dai ni 2014 ning du sai. Hpyen Du kaba mung up ahkaw ahkang hpe 1962 ning hta kashun la (ဆိုရှယ်လစ်) masa hte matsan dik ai mungdan shatai sai.
Ya aten hta gaw, hpyen jaubu kaba wa gaw Hkawhkam tingnyang ningnan shachyaw ana dung up nga ai aten re ai. Democracy masa rai sai da masu manai ai sha rai nga ai.
Dai majaw " Amyu sha hte Majan" Padang dip lu na lam gaw, " nat bala ningbaw hkanghkyi sharaw, baren nunraw, magwi ahpraw, dusat ni hpe kadawng nawku ai ni hte Anhte kamsham nawku ai Chyahtum Chyalai Yehowa Karai hte n bung ai shai ai hpe mu mada ga, dum ga, shai ga, sadi maja nga ga, Karai Kasang hpe n shut ga, chyeju shakawn kyu hpyi yang teng sha amyu sha ni majan dang na.
2015 CHYURUM SHALAT MAGAZINE.
Motion by Unelected Members of Parliament (aka) Representative of Occupation Force
at 8/16/2017 12:18:00 AM
1) Burma army remains to be an occupation force in Kachin since it lacks public mandate or representation of Kachin people. Notasingle Kachin Officer or Kachin serviceman is in Tatmadaw's Northern Command (excluding drug-running militia forces) should be clear testament that it is an ethnocentric monolithic armed force run by one ethnic andasingular religious group since 1962.
2) There is only one-side to this conflict. Since June 9th, 2011; war only erupted in response to military attacks/provocations by Burma Army. So was in Danai, last month or Kasung, last week.
3) Burma Army which sold Myitsone Mega-Hydropower Dam (size of Singapore) constructed on the Irrawaddy river that is depended by major Burmese cities and communities toaforeign government state-owned entity is truest breach of national sovereignty.
4) Granting National ID to illegal foreign nationals in Mandalay, Kachin, and Northern Shan isathreat to national security.
5) Hpakant is dummy-proof example of Burma Army's belligerence stance on environmental issue. Nearly all of jade mines in Hpakant are operated by the Army's very own UMEHL, army-partnered enterprises, or ran by Army families and their cronies. Few native businessmen who run jade mines are either forced to partner with the army personnels or concede their lucrative mining lots to army surrogates.
6) As promised during founding of this Union, Kachin army has no right to be in Yangon, Mandalay, or Naypyidaw; but we have every right to be in our native land. It's our home and indigenous right.
7) If Tatmadaw deem itself to be representative of all people, strip the top 10 posts, all Burmans/Buddhists, and replace them with major ethnic nationalities and allow each ethnic to take rotational leadership based upon merit.
8)Parliment should passabill to force current and former army generals to reveal their domestic and foreign holdings and exchange for amnesty in return of stolen national wealth. The country may witness drastic uptick in GDP.
9) If Burma Army accuses ethnic armed organizations of committing crimes, they should invite ICC or UN investigators, and trial any perpetrator of war crimes from both sides of the conflict. Would they welcome it?
10) If Burma Army is dearly keen on public welfare, security, and properties; they should turn-in all woefully seized or confiscated land and town-down properties to farmers and citizen owners. This phenomenon has left many Burmese homeless.
Tara Kasa Nangzing LaaPrat Labau (Daw I )
at 8/15/2017 10:17:00 AM
Prat Ningnan Kachin Mung Masa Prat Hkrun Lam
Tara Kasa Nangzing LaaPrat Labau (Daw Langai)
Ahkaw ahkang jaw ya ai Srm. Maureen Nangzing hpe chyeju dum ai.
Tara kasa Nangzing La gaw 1931 ning March 27 ya shani Manmaw mareeshangai wa sai. Jawngma ten tsang7kawn tsang 10 du hkra nambat 1 hkrai lu nna ningtawn ai majaw free tuition hte stipend shata mi lap 15 lu u ai.
1955ning hta Yangung Dakkasu kaw na BA janmau lu nna tara kasa hpaji janmau BL hpe 1957 hta lu nna Jinghpaw Wunpawng sha ni hta shawng nnan Tara kasa hpaji janmau (BA; BL)lu ai wa re. Dakkasu jawng maaten hta Yangung Dakkasu Jawngma Hpung-Yangon University Student Union (RUSU)aningbaw tai lai wa sai. 1956 ning hta KNC (Kachin National Congress) maga hku Ra Lata Poi shang let Sama Duwa Sinwa Naw (Kunghpan Hpung) hte Shingjawng lai wa sai. Dai aten hta Asak (25) ning sha naw rai u ai.
1960 ning hta Ningbaw Kaba Maran Brang Seng hte rau Du Mare (Du Kahtawng) hpe Woi de sai. Dai hpang Htunghking Sharawt Hpunganingbaw mung galaw lai wa sai.
1960 Auguk shata 22 ya shani Myitkyina mare Hpung shagu na shawa Mun manga (50000) ram hte Bukda nawku htung hpe mungdananawku htung (State Religion) shatai ai lam hpe woiawn ninghkap lai wa sai. State religion commission hpung ni jawn lung wa ai Wangleng hpe htu kanawng kau dat masai.
1962 kawn 1988 du hkra lang hte lang mung masaamajaw htawng rim rawng hkrum, zingri zingrat hkrum a, jit hkyi ntsin hte man myit, hkashin let jamjau jam hkau, nni nhkri hkrum let prat pra sa wa sai. Democracy lai hpe lu na matu simsaq ladat hku woi awn galaw ai majaw MSL hte NWT hpyen gumshem asuya ni zingri zingrat hkrum ai wa re. Jinghpaw Wunpawng sha ni kaw mung masa labau hta shang lawm let htawng kata kaw sha aprat hpe jahtum ai wa mung rai nga ai.
Dai ni prat nnan Kachin mung masa hkrun lam hta ya aten du hkra tinang hkam la ai mung masaamajaw htawng she rawng hkra re ai mung masa la/num n nga ai daram re.
Jinghpaw Wunpawng sha nialawt lu lamamatu mung masa machyoi ningla (statesman) paw pru wa na hpe myit mada let..,
Daw (2) matut hti la ga.
မြန်မာစစ်တပ်မှ ကဆုန့်၊ RC ဘုရားကျောင်း ထဲမှ အလှူပုံး ရိုက်ခွဲ ပြီး အလှူ ငွေ များ ခိုးယူ
at 8/15/2017 10:14:00 AM
ကချင်ပြည်နယ် ၊ နမ္မတီး မြို့နယ် ၊ ကဆုန့် ကျေးရွာ သို့ မြန်မာ စစ်တပ်
(ခမ၇-၃၈၁) တပ်ဖွဲ့ များ သည် (၁၁၊၈၊၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)
နာရီအချိန်ခန့် တွင် ရောက်ရှိလာပြီး ရွာထဲ ရှိတွေ့ သမျှ ၇ွာ သားများအား
အကြောင်းမဲ့ သေနတ် ဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် ခြင်းကြောင့် ရွာ သားအချို့
ထိခိုက်သေဆုံးပြီး အချို့ ဒဏ်ရာ ရရှိကာ ကဆုန့် ရွာသား (၁,၀၀၀) ကျော်
(ရွာလုံး-ကျွတ်)တို့ သည် မြန်မာ စ်တပ် ၏ ရန်မှ လွတ်ရန် အတွက် နမ္မတီး
၊လမ်ဘရော့ယာန် (Lam Braw Yang) သို့ အသက်လု က ကိုယ်လွှတ်
မြန်မာ စစ်တပ် (ခမရ-၃၈၁) တပ်ဖွဲ့ များသည် ကဆုန့် ကျေးရွာ ရှိ RC
ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း ဆောင် အထဲတွင် စခန်းချ ပြီး ဘုရားကျောင်း
အတွင်းရှိ ၊ဘုရားစဉ် ရှိ အလှူ ပုံး အား တော့ ရိုက်ဖျက် ကာ ၊ အတွင်းရှိ
အလှူ ငွေ အားလုံးကို ခိုးယူလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထို့ အပြင် မြန်မာ စစ်တပ်(ခမရ-၃၈၁ )တပ် များ သည် ၊ မိမိတို့ ကက်သလစ်
(RC) ဘာသာဝင်များ အထွုတ်အမြတ် ထားရာ ဘုရား ဗိတ်မာန်တော် အတွင်း
ချက်ပြုတ် စားသောက်၊ မဖွယ်မရာ အရေက်သေစာများ သောက်စား ကာ
ပွစာကျဲ အောင် မွှေနှောက်ထားခဲ့ ကြသည် ကို ဒေသခံ များက ဓါတ်ပုံ အထောက်
အထားများနှင့် တကွ ပေးပို့ လာ ကြပါသည်။
ဘုရားကျောင်း အတွင်း မှ (၇၅-မမ) လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ် ထားသည့်
ကျည်ဆံ ခွံ များလည်း ပြန့် ကျဲ လျှက် ရှိသည် ကို တွေ့ရပါသည်။
(၄င်း မြန်မာ တပ်(၁၂.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၁) မှ
လာရောက် ရှင်းလင်း ကာ ကဆုန့် ကျေးရွာမှ တိုက်ထုတ် လိုက် ပြီဖြစ်ကြောင်း
Kasung,mare na RC nawku jawng kata na A Lu, sadek hpe myen
hpyen niadup hpaw di A Lu, gumhpraw hpe la kau.
ရခိုင်ပြည်နယ်အား ကြည့်မြင်ခြင်း အပိုင်း ၁
at 8/15/2017 10:09:00 AM
ရခိုင်ပြည်သည် မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်း ကမ်းရိုးတန်းဒေသ
ဖြစ်သည်။ မြောက်မှတောင်သို့ သွယ်တန်းနေသည့် မြင့်မားသော ရခိုင်ရိုးမ တောင်တန်းက ပြည်မနှင့်ရခိုင်အကြားတားဆီးထားသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်
တောင်ဖက်ခြမ်း၌ ကမ်းရိုးတန်းသည် ကျ ဉ်းမြောင်းသေးသွယ်သော်လည်း
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဖက်ခြမ်း နတ်မြစ် မယူမြစ် ကုလားတန်မြစ် လေးမြို့
မြစ်ဝှမ်းတို့ကား ကျယ်ပြန့်သည့် မြေဆီမြေနှစ်ပြည့်ဝသည့်လွင်ပြင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ရခိုင်တို့၏နှစ်ထောင်ချီ သည့်သမိုင်းတွင် ကုလားတန်
မြစ်ဝှမ်း လေးမြို့ မြစ်ဝှမ်းတို့တွင် ဓညဝတီ ဝေသာလီ လေးမြို့ မြောက်ဦးဟူ
သည့် ရခိုင်မြို့ ပြပဒေသရာဇ်နိုင်ငံများ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြပြီး စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုး
ခဲ့ကြသည်။ စောစီးစွာကပင် ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့သည်။ သို့သော် ပဒေသ
ရာဇ်တို့၏အားပြို င်မှု တွင် ၁၇၈၅ ခုနှစ်တွင် မြောက်ဦးထီးနန်းဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး
အင်းဝဘုရင်လက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင်
အင်္ဂလိပ်တို့လက်အောက်သို့ ကျ ရောက်ခဲ့ပြန်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ
ပြည်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အင်္ဂလိပ်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။
အနီးခေတ်သမိုင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်သားတို့သည် ပြသနာများ
စွာကို ရင်ဆိုင်ရုန်းကန်နေခဲ့ရသကဲ့သို့ ယနေ့တိုင်လည်း ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်နေ
ရဆဲဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနှင့် ယနေ့ကာလတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့်
ပြသနာ ၃ ရပ်ရှိသည်ဟုဆိုရပါမည်။ ၎င်းတို့မှာ
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ် နိုင်ငံရေးပြသနာ
၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှု ပ်နှံမှု ပြသနာ
၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီပြသနာ တို့ဖြစ်သည်။
အထက်ပါပြသနာ ၃ ရပ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြသ
နာ ၃ ရပ်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်သားတို့ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြသနာ ၃ ရပ်ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်နေသူများ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြသနာ
ကို ဖြေရှင်းရန်တာဝန်ရှိသူများ မျက်မှောက်ပြု ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြသနာ ၃ ရပ်လည်းဖြစ်ပေသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် နိုင်ငံရေးပြသနာတွင် နှစ်ပိုင်းရှိသည်။ ပထမပိုင်းက
ရခိုင်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ပိုင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လူမှု စီးပွါးနှင့်ပတ်သက်သောအပိုင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်ပတ်သက်သည့်အပိုင်းသည် ရခိုင်
အမျိုးသားစိတ်ကို ဖေါ်ပြသည်။ နှစ်ထောင်ချီ ၍ မြို့ ပြနိုင်ငံကို ထူထောင်နိုင်
ခဲ့သည့် အခြေခံပေါ် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ်ကြငှန်းနှင့် နေခဲ့သည်ဆိုသည့်
အခြေခံပေါ်တွင် အင်းဝဘုရင်၏ သိမ်းပိုက်မှု ကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်ခဲ့
ကြသည်။ အင်္ဂလိပ် ဂျ ပန်တို့အားလည်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျ င်တိုက်ပွဲဝင်
ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုသည့်အခြေခံပေါ်တွင် ရခိုင်သမတနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးဆိုသည်ကို ဂျ ပန်ခေတ်ကထဲက စတင် ကြွေးကြော်ခဲ့ကြဘူး သည်။
လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကာလက ပြည်မနှင့်ပူးပေါင်းသော ဖဆပလ အမတ်များသည် ၁၉၄၇ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ်
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်လူထုကြားသြဇာရှိသော ရခိုင်အမတ်များ အနိုင်ရခဲ့
သည်။ ထို့နောက် ထိုအမတ်များစုပေါင်းပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားညီညွတ်ရေး
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ( ရတည ) ကိုဖွဲ့စည်း၍ ပါလီမန်တွင် ရခိုင်အား အမျိုးသား
ပြည်နယ်တရပ် သတ်မှတ်ရေးအတွက် ပါလီမန်အတွင်း လုံးပမ်းခဲ့ကြသည်။
ထိုစဉ်က ရခိုင်အား ပြည်မအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တွဲ၍ တိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ထား
သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရရှိရေးအတွက် ရတည ရခိုင်အမတ်များသည် ဖဆပလ အကွဲတွင် သန့်ရှင်းနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဗိုလ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ရခိုင်တို့၏
ဥပဒေတွင်းလှု ပ်ရှားမှု ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေထွက်
ရှိလာသောအခါ ရခိုင်အား တိုင်းမှ ပြည်နယ်အဆင့်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့
သည်။ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံအပြီး ၁၉၉၀ ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ALD ပါတီသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အနိင်ရခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးခြင်း
မခံခဲ့ရ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် RNDP ပါတီ ၊၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်
RNDP နှင့် ALD တို့ပေါင်းထားသည့် ANP ပါတီတို့ နေရာအများစုတွင် အနိုင်
လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက် ကျင်းပသည့် ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲတိုင်းတွင်
ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအများစုတွင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီများသာ အနိုင်ရကြ
သည်။ ပြည်မမှ အာဏာရပါတီရော အတိုက်အခံပါတီပါ တိုးမပေါက်ခဲ့ပေ။ ဤသည်မှာ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာစေ့ဆော်မှု ကြောင့်လည်းဖြစ်သကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းသို့ ပြည်မမှအခြေချ လာရောက်နေထိုင်သူ မရှိသလောက်နည်းပါးသည်ကိုလည်း ပြသည်။
ဤသို့ဥပဒေတွင်း နိုင်ငံရေးလှု ပ်ရှားမှု ရှိသကဲ့သို့ မိမိနိုင်ငံရေး ရည်မှန်း
ချက်အတွက် အစိုးရအား လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှု များသည် ၁၉၄၇ မှစတင်
ခဲ့သည်။ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှု ကို မျိုးဆက် ၃ ဆက်ခွဲခြားတွေ့ရှိရ
သည်။ ပထမမျိုးဆက်မှာ ၁၉၄၈ မှစတင်သော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ၎င်းအဖွဲ့
များမှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူ နစ်ပါတီ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူ နစ်ပါတီ
(မူလ အလံနီ ) ၊ ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးပါတီ၊ ရလတ ခေါ် ရခိုင်အမျိုးသား
လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး၊ ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်
(ရမလဖ) ၊ ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ( ရမညဖ) စသည့် လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့အားလုံးလုံးလိုလိုတွင် အစောပိုင်းကာလ
က လက်ဝဲအယူအဆလွှမ်းမိုးသည်။ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းတွင်မှ အမျိုးသား
ရေးအလံစတင်တွေ့ရသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် အစောပိုင်းကာလများတွင် အင်
အားကောင်းခဲ့သော်လည်း ၁၉၈၀ ခန့်တွင် အင်အားလျော့ကျ ပြီး ဘင်္ဂလား
အိန္ဒိယ နယ်စပ်သို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ ရခိုင်
လက်နက်ကိုင် ပထမမျိုးဆက်အဖွဲ့များ မတွေ့ရတော့ပေ။
ရခိုင်လက်နက်ကိုင် ဒုတိယမျိုးဆက်မှာ ALP/ALA ရခိုင်လွတ်မြောက်
ရေးပါတီ/ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နှင့် AIO/AIA ရခိုင်ပြည်လွတ်
လပ်ရေးအဖွဲ့/ ရခိုင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် တို့ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၈ ဝန်းကျင်တွင်
အပြို င်းအရိုင်းပေါ်လာခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေးအလံလွှင်ထူ စွဲကိုင်ကြသည်။ လက်ရှိတွင် ထိုဒုတိယမျိုးဆက်မှ ALP/ALA မှာ အင်အားမကြီးထွားသော် လည်း ယခုတိုင်ရပ်တည်နေနိုင်သေးသည်။ ယခုအခါ အစိုးရနှင့် NCA လက် မှတ်ထိုးထားပြီး အစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ရခိုင်လက်နက်ကိုင် တတိယမျိုးဆက်မှာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် ပေါ်
ပေါက်လာသည်။ ၎င်းတို့မှာ ANC/AA ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ/ရက္ခိုင့်တပ်
မတော်နှင့် ULA/AA ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် / ရက္ခိုင့်တပ်မတော် တို့ဖြစ်
သည်။ နှစ်ဖွဲ့လုံး အမျိုးသားရေးအလံစွဲကိုင်ထားကြသည်။ ANC/AA မှာ
အင်အားကြီးထွားမလာဘဲ ရပ်တည်နိုင်သည့်အဆင့်တွင်ရှိသည်။ ULA/AA
ကတော့ အင်အားထောင်အချို့ထိ ကြီးထွားလာပြီး ရခိုင်လူထုကြားတွင် ရေ
ပမ်းအစားဆုံးဖြစ်သည်။ နှစ်ဖွဲလုံး NCA လက်မှတ်ထိုးခြင်းမရှိသေးဘဲဆွေး
၂၀၁၄ ခုနှစ်ပြည်နယ်အစိုးရကထုတ်ပြန်သည့် ကိန်းဂဏန်းများအရ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စပါးစိုက်ဧက ၁၁၁၁၈၃၅ ဧက ရှိပြီး အခြားသီးနှံစိုက်
လယ်မြေ ၁၂၃၈၅ ဧကရှိသည်။ ဝမ်းစားဖူလုံမှု ၁၄၉.၇၈% ဖြစ်သည်။ ဆန်
စပါးထွက်ရှိမှု ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ပိုလျံ သည်။ မိုင် ၃၆၀ ရှည်လျားသောကမ်းရိုးတန်း
နှင့် မြစ်ချောင်းများစွာတွင် ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၍ရသည်။ ဆားလုပ်ငန်း လုပ်
ကိုင်၍ရသည်။ ပုဇွန်မွေးမြူ ဧရိယာ ၁၀၀၈၉၅ ဧကရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သစ်
ဝါးထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကြိုးဝိုင်းသစ်တော ၈၁၇ စတုရန်းမိုင် ကြိုးပြင်
ကာကွယ်တော ၁၈၀၇ စတုရန်းမိုင်ရှိသည်။ သာယာလှပသော ပင်လယ်ကမ်း
ခြေနှင့် အပမ်းဖြေလုပ်ကိုင်နိုင်နေများရှိသည်။ အခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်း
အများစုတွင်မရှိသည့် ရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှု မြို့ တော်တခုရှိသည်။
သို့သော် ဤသို့သောရေခံမြေခံကောင်းသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ မစ္စတာကိုဖီအာနန်၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော် မရှင်၏ ၂၀၁၇ မတ်လတွင် ထုတ်ပြန်သည့် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာအရ မြန်
မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်နေသည်။ စီးပွါးရေးကဏ္ဏတွင်
အလုပ်သမားအများစုအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုများပြု လုပ်နိုင်ရန် လုံလောက်သည့်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ် ၅ သိန်းခန့်သည် ထိုင်း မလေး ရှား တရုတ်ပြည်နှင့် ဖါးကန့်ဒေသတို့တွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ
ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်၏ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာအရ ပြည်နယ်အတွင်း
အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းသည်။
ပညာရေးကဏ္ဏတွင်လည်း တပြည်လုံးတွင် ပျမ်းမျှလုပ်ဆောင်နိုင်မှု ၏
အောက်တွင်ရှိနေသည်။ မူလတန်းအဆင့်ပြီးသည်အထိ စာသင်ကြားနိုင်
သည့် ကျောင်းသား ရာခိုင်နှုံးအလွန်နိမ့်ကျနေသည်ဟုဆိုပါသည်။ ထို့ပြင်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့ နယ် ၁၁ မြို့ နယ် မြို့ နယ်ခွဲ ၂ ခုတိုတွင် မဟာဓါတ်အား
လိုင်းမှ လျပ်စစ်စတင်သုံးစွဲနိုင်သည်မှ ၂ နှစ်မျှ သာရှိသေးသည်။ မြို့ နယ် ၆ မြို့
နယ်နှင့် မြို့ နယ်ခွဲ ၁ ခုတို့တွင် မဟာဓါတ်အားလိုင်းမရောက်သေးပေ။ ရောက်
သည့်မြို့နယ်များတွင်လည်း ကျေးရွာအများစု မရောက်နိုင်သေး။
ဤသို့သောအခြေအနေတွင် ရခိုင်လူထုကြားတွင် နိုင်ငံရေးအရ မကြေ လည်မှု များရှိနေသည်မှာ မထူးဆန်းပေ။ ANP အနေနှင့် ရခိုင်လူထုရွေးချယ်
မှု အရ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် အများစုဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအခြေခံဥပ
ဒေအရ ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ခွင့်မရှိ။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် အများစုဖြစ်နေ
သော်လည်း ရခိုင်လူထုအကျိုးရှိမည့်ဥပဒေများချမှတ်နိုင်ရန် အကန့်အသတ်ရှိ သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်ဆိုသည်မှာလည်း ပြည်ထောင်စု
အစိုးရဘတ်ဂျ က်၏ ၀.၇% (2016/17) သာရှိသည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
ဝန်ကြီးဌာနများက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် သုံးစွဲသည့် ဘတ်ဂျက်များကိုလည်း
ရှင်းလင်းစွာ မသိရသည့်ပြင် ရခိုင်လူထုကိုယ်စားပြု သူများ စီမံခန့်ခွဲမှု မရဟု
ကြည့်မြင်ကြသည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အများစုအနိုင်ရခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်များမှလည်း ပြည်ထောင်
စုအဆင့်တွင် ၂% မှ ၄% မျှသာ ရှိရာ မည်သည့်ထိရောက်သည့် အဆိုဆုံးဖြတ်
ချက်များကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ထိရောက်စွာတင်ပြဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိ ဟု ရှု မြင်ကြသည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် ရခိုင်လူထုကြားတွင် ဥပဒေတွင်းဆောင်ရွက်
မှု များက ရခိုင်လူထုအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု နည်းသည်ဟုရှု မြင်ကြ
သည်။ အမျိုးသားလက္ခဏာအရ ANP ပါတီကို မဲပေးကြသော်လည်း ရခိုင်
အကျိုးစီးပွါးအတွက် လက်နက်ကိုင်တိုက်မှ ရမည်ဆိုသည့်အမြင်သည် ရခိုင်
လူထုအကြား အထူးသဖြင့် ရခိုင်လူငယ်များကြားဖြစ်ပေါ်လာပေရာ ULA/AA လည်းအင်အားကြီးထွားလာသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခသံသရာသည် လည်း အဆုံးမသတ်နိုင်ဘဲရှိနေသည်။
အဓိကပြသနာမှာ ဖက်ဒရယ်မူများနှင့်အညီ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စု
အစိုးရကြား အာဏာခွဲဝေမှု လုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲဝေမှု များကို နိုင်ငံရေးအရဖြေရှင်း
ပေးမှသာ လက်ရှိရခိုင်ပြည်နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ပေလိမ့်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှု ပ်နှံမှု ပြသနာ
လက်ရှိတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှု ပ်နှံမှု မှာ ၁၀
ဘီလျံကျော်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ အများစု ရခိုင်ကမ်းလွန်၌ ရေနံနှင့်သဘာဝ
ဓါတ်ငွေ့တူးဖေါ်မှုတွင်မြှု ပ်နှံထားကြသည်။ လက်ရှိတွင် ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့
ထုတ်လုပ်မှု စတင်နိုင်ပြီး ကျောက်ဖြူ မြို့ အနီးတွင် Offshore Gas Terminal
ဆောက်လုပ်၍ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် စတင်ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှသယ်ဆောင်လာသည့် တရုတ်တို့၏ရေနံများကို ပိုက်လိုင်းဖြင့် မြန်မာပြည်ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ရန် ခွင့်ပြု ခဲ့ပြီးရေနံပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ခွင့် မဒေးကျွန်းတွင် ရေနံတင်သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းဆောက်လုပ်ခွင့် ရေနံသိုလှောင်ကန်နှင့် ရေနံတွန်းပို့စခန်းများ ဆောက်လုပ်ခွင့် မြန်မာရေ ကြောင်းအသုံးပြု ခွင့်တို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်အစိုးရပိုင် China International Trust Invesment Corporation CITIC သည် ကျောက်ဖြူ
တွင် အထူးစီးပွါးရေးဇုံ ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိထားပြီး အထူးစီးပွါးရေးဇုံနှင့်ဆက်စပ်
ပြီး ပင်လယ်ကူး ကုန်တင်ကုန်ချ ဆိပ်ကမ်းတခုဆောက်လုပ်ရန် ဆွေးနွေး
ဤသို့သောအခြေအနေတွင် ရခိုင်ဒေသခံများ လယ်မြေများစွာ လျော်
ကြေးပေးသိမ်းယူခံရသည်။ ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးများဝင်ထွက်မှု ကြောင့်
ဒေသခံတို့၏ ရေလုပ်ငန်းများထိခိုက်သည်။ ဒေသခံတို့၏ မိရိုးဖလာ အသက်
မွေးဝမ်းကြောင်းတို့ ပြောင်းလဲရမည့်အခြေသို့ဆိုက်ပြီး အခက်အခဲရှိကုန်ကြ
သည်။ထို့ပြင် အထူးစီးပွါးဇုံတွင် ဆောက်လုပ်မည့် စက်ရုံများမှ ဘေးထွက်ဆိုး ကျိုးများရှိလာပါက ဒေသခံတို့အား သက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ရခိုင်လူထုကြားတွင် မေးခွန်းပေါ်လာသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လာရောက် ရင်းနှီးမြှု ပ်နှံမှု များမှ ရခိုင်တို့အတွက် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရပါ သနည်း ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
လောလောဆယ်တွင် ၂၀၁၄ အကုန် ၂၀၁၅ တွင် ၂၃၀KV ဓါတ်အား
ခွဲရုံ ၄ ရုံနှင့် မဟာဓါတ်အားလိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ရောက်လာခြင်းသည်
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှု ပ်နှံမှု ၏ အကျိုးအမြတ်တစိတ်တပိုင်း ရယူခံစားခြင်း
ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်အဓိကပြသနာမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှု ပ်နှံ
များ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်လာ၍ ရသည့်အကျိုးအမြတ်မှ ရခိုင်ပြည်
နယ်အတွက် ဒေသခံများအတွက် မည်ရွေ့မည်မျှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်ဆို
သည့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်မရှိ ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် အကျိုးအမြတ်မည်မျှ
ရပြီး မည်သို့ခွဲဝေသုံးစွဲသည်တို့မရှိလျင် ထိုရင်းနှီးမြှု ပ်နှံများမှ ရခိုင်ပြည်နယ်
အတွက် မည်မျှ အကျိုးခံစားခွင့်ရသနည်း မေးခွန်းကား ဆက်ရှိနေပေဦး မည်။ မကြေလည်မှု များ အကြိတ်အခဲများဆက်၍ ရှိနေပေဦးမည်။
ဤ ပြသနာသည် နိုင်ငံရေးပြသနာနှင့် ဆက်၍နေသကဲ့သို့ နိင်ငံရေး
အရ မကြေလည်မှု များကို ထပ်မံအားဖြည့်ပေးသကဲ့သို့ရှိနေသည်။ ပြသနာ
ဖြေရှင်းရန်မှာ အဓိက နိုင်ငံရေးပြသနာဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်
မူများနှင့်အညီ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုတို့ကြား အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်
ခွဲဝေသုံးစွဲခွင့်တို့အတွက် အားလုံးလက်ခံနိုင်သည့် ဥပဒေများရေးဆွဲပြဌာန်း
ရီနေးဆင့် မဂ္ဂဇင်း ဇူလိုင်-သြဂုတ် ၂၀၁၇ တွင်
ကချင် ကက်သလစ်ဆရာတော် (၃) ပါးက စစ်မှန် သောကိုယ်ပို...
Motion by Unelected Members of Parliament (aka) Re...
မြန်မာစစ်တပ်မှ ကဆုန့်၊ RC ဘုရားကျောင်း ထဲမှ အလှူပံ...
MUNGMYIT SINLI GA A MUNG MASA SHAWNGLAM
Rawt malan ning baw ngu ai gaw (Video )